असारमा मात्रै उठ्छ पत्रेखोलाको मुद्दा - Pradesh Today
Homebreaking-newsअसारमा मात्रै उठ्छ पत्रेखोलाको मुद्दा
पुल निर्माण एकादेशको कथाजस्तै जीतसागर जी.एम.
दाङ, ३ असार । तुलसीपुर–७ विनोद नेपाली बुधबार बिहानै घोराहीको यात्रा तय गरे । तुलसीपुरबाट बिहान करिब ७ बजेतिर मोटरसाइलको यात्रामा हिडेका उनी पत्रेखोलामा पुगेपछि केहिबेर रोकिनुप¥यो ।
खोलामा पानीको बहाव बढेको देखेपछि केहि समय रोकिए तर केहि उपाय नलागेपछि खोला तर्ने विचार गरे । खोलाको बीचमै मोटरसाइकल रोकियो । लामो प्रयासपछि मोटरसाइल त पार लगाए तर उनीसँग भएको मोबाइल लगायतका सामग्रीमा पानी प¥यो । ‘घोराही जानैपर्ने भएका कारण पानी परिरहेकै बीचमा यात्रा तय गरेँ, तर खोलामा पुल नहुँदा निकै सास्ती भोग्नुप¥यो’ उनले भने– ‘यो पुल बन्ने कुरा त हामीलाई एकादेशको कथाजस्तै लाग्न थालेको छ ।’
उनले भने– ‘खै यो पत्रेखोलाको पुल कहिले निर्माण हुने हो ? जहिले पनि आधा निर्माणमै अलपत्र परेको हुन्छ, किन होला कसैको ध्यान पुग्न नसकेको ।’ दंगीशरण–२ का विशाल चौधरी पनि बुधबार पत्रेखोलामा आएको बाढीका कारण मोटरसाइकल खोला पार गराउन एक सय रूपैयाँ खर्च गरे । घोराहीबाट फर्किने बेलामा पनि फेरि एक सय रूपैयाँ बुझाएर घर फर्के ।
खोलामा पुल नहुँदा उनले खोलामा मोटरसाइकल पार लगाउनकै लागि दुईपटकमा दुई सय रूपैयाँ खर्चनुप¥यो । ‘घोराही तुलसीपुरको यात्रा गर्दा निकै सोच्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई यो दुःखकष्ट कहिलेसम्म होला कुन्नी ?’ पत्रेखोला पुल निर्माण शुरू गरेको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
खोलामा यसवर्ष पनि पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती पाउन थालेका छन् । तर खोलामा पुल बन्ने कुरो एकादेशको कथाजस्तै भएको छ । पुल निर्माणमा चासो दिनुपर्ने निकाय मौन हुँदा सर्वसाधारणले ज्यान जोखिममा राख्नुपरेको छ ।
तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने पत्रेखोलामा पुल आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि निर्माण शुरू भएको हो । तर पुलले विभिन्न कारणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन् । तत्कालिन अवस्थामा पुलको डिजाईन नमिलेको भन्दै निर्माण रोकिएको थियो । पुलको दायाँ–बायाँ पिलर निर्माण हुने समयमा डिजाईन नमिलेको कारण देखाउँदै निर्माण हुन सकेको थिएन् । पुल निर्माण रोकिएपछि नागरिकले सास्ती पाउँदै आएकोमा चालु वर्षको असोजमा मात्रै मन्त्री परिषद् बैठकबाट पुललाई यस वर्षभित्र पूर्णता दिने निर्णय भयो ।
अहिले पछिल्लो समय मन्त्री परिषद्को निर्णणपछि पुलको नयाँ डिजाईन अनुसार पुल निर्माणको काम शुरू भएको छ । पछिल्लो पटक पुलको निर्माण यसै चालु वर्षमा सक्नुपर्ने थियो तर फेरि यसवर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण निर्माण अवधि लम्बिने निश्चित भएको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख निरज शाक्यले बताए ।
‘ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गरेको भए यसवर्ष त सकिन्थ्यो, तीन महिनाको काम थियो तर अहिले पनि समयमा काम हुन सकेन्, अहिले त झन् वर्षा पनि शुरू भइसक्यो’ उनले भने– ‘कोरोना महामारीका कारण सरकारले नै सम्झौता म्याद थप्ने भनिसकेकाले अब अर्को वर्ष जाने निश्चित भयो ।’
विभिन्न कारणले ६ वर्षसम्म पिलर पनि ठडिन नसकेको अवस्थामा अब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको तर यसै आर्थिक वर्षमा भने नसकिने उनले बताए । ‘निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, वरपरको वाल बनाउन बाहेक अरू काम लगभग सकिएको छ, अबको केहि दिनमा खोला पुल लगाउँछौँ र बाँकी खाल्डाखुल्डी पनि बनाउँछौँ ।’ उनले भने– ‘अवरोध सिर्जना नभएको भए तीन महिनामै हुने थियो ।’ ४० मिटर लम्बाई र ११ मिटर चौडाईमा निर्माण हुने कार्यालय प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए ।
वर्षातले सडकमा क्षति
अविरल वर्षातका कारण तुलसीपुर–१९ छिल्लीकोट पुग्ने सडक ठाउँमा ठाउँमा क्षतविच्छेद हुँदा सवारी आवागमन रोकिएको स्थानीय अगुवा परविर पुनले जानकारी दिए । यस्तै राप्ती लोकमार्गअन्तर्गत कपुरकोट चोरखोला सडक खण्ड अवरूद्ध भएको छ । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सडकमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए । वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा कच्ची सडकमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।